जब ४ महिलासँग एक्ला पुरूष दिउँसै गेष्ट हाउसकाे बन्द काेठामा जुटे पछि…. – ताजा समाचार
जब ४ महिलासँग एक्ला पुरूष दिउँसै गेष्ट हाउसकाे बन्द काेठामा जुटे पछि….
काठमाडौं : भक्तपुरको सुर्यबिनायक नगरपालिका–८ आदर्श स्थित एक गेस्ट हाउसबाट प्रहरीले चार महिला र एकजना पुरुषलाई आप त्तिजनक अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । पार्वती भन्ने गोमा गोतामेले संचालन गरेको कस्तुरी चमेना गृह गेस्ट हाउसको कोठामा प्रहरीले छापा मारी अ नैतिक कृयाकलाप गरिरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
एउटाकी पत्नी अर्काकी प्रेमिका काठमाडौंमा मध्यराति यसरी चल्छ अफेयर निर्मला (नाम परिवर्तन)का पति अमेरिकामा थिए । काठमाडौंमा उनको प्रेमी थिए, बिक्रम शर्मा (नाम परिवर्तन) । शर्मासँग उनी लामो समय डेटिङमा रहिन् । कहिले ककनी, कहिले धुलिखेलमा यो जोडीले प्रेम अनुरागमा समय बितायो । घरि–घरि शारिरीक स म्बन्ध पनि जोडियो । निर्मला अमेरिका पुगिन् बिक्रम काठमाडौंमै आफ्नो पेशा व्यावसायमा व्यस्त छन् । उनीहरूको अहिलेको सम्बन्ध अपरिचित जस्तै छ । उनीहरूको सम्झौताको सम्बन्ध डिस्कोबाट सुरु भएको थियो । ‘अफिसको काम अबेर सकिएपछि दरबारमार्गको क्लव छिर्ने गर्थें, उनी पनि त्यहाँ एक्लै बसेको देखेपछि डान्सका लागि अफर गरें । केही घुट्की पियौं त्यसपछि परिचय बढ्यो’, बिक्रम विगत कोट्याउँछन्,‘एउटा सम्झौताको सम्बन्धमा केही समय रमाइलो गरौं भन्ने सल्लाह भयो । र, हामी अफेयरमा थियौं ।’
ठमेलको एउटा व्युटी पार्लर सञ्चालन गरेकी अस्मिता (नाम परिवर्तन)सँग वानेश्वरको एक होस्टेलमा बस्ने गुरु अधिकारी (नाम परिवर्तन)को भेट सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो । उनीहरू क्लवमा भेट्ने योजना बन्यो । ठमेलको एउटा क्लवमा राम्रो चिनजान भएपछि अस्मिताले नै सम्बन्धमा रहनका लागि गुरुलाई प्रस्ताव गरिन् । आफ्ना पति अस्ट्रेलियामा रहेको र ६ महिनामा फर्किने बताउँदै गुरुसँग त्यसबेलासम्मको सम्बन्ध कायम राख्ने सहमति बनेको थियो । एक्लै बस्ने अस्मिताको घरमै गुरुका धेरै समय बिते । अहिले दुवैको सम्पर्क छैन । गुरु भन्छन्,‘यस्तो पनि सम्बन्ध र प्रेम गाँसियो, ६ महिनासम्म माया पनि गरियो मस्ती पनि गरियो ।’
सुन काण्डकै मुख्य अ भियुक्त चुडामणी उप्रेती गोरेको पनि रक्षा भण्डारीसँग सम्झौताको सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानले खुलाइसकेको छ । छिटो पैसा कमाउने र खर्च गर्न सिपालुहरूका लागि अस्थायी सम्बन्ध साधारण बन्ने गरेको समाजशास्त्रीहरू बताउँछन् । यस्ता सम्बन्धमा निहीत स्वार्थ पनि हुन्छन् । तर, इमान्दार सम्झौता हुने गरेको पाइन्छ । यी देखिएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सम्झौताको सम्बन्धको मुख्य आधार लिभिङ टुगेदर पनि हो । जुन काठमाडौंमा व्याप्त भइसकेको छ । ‘यौ न आशक्तिमा केन्द्रित रहेर यस्ता सम्बन्ध बढि से बढि कायम हुने गरेका छन् । युरोप अमेरिका तिर यस्ता सम्बन्धलाई समान्य ठानिन्छ । सञ्चारकेन्द्रबाट ।